Tsy nijanona teo ny asa fa raikitra ny fifanenjehana, izay nitohy tamin'ny fifandonana teo amin'ny roa tonta ka vaky nandositra ireo dahalo. Tavela teo noho izany ny basy FC miisa telo sy basy poleta iray nampiasain'ireo dahalo. Dahalo iray izay isan'ny mpitarika azy ireo koa no lavo. Tsy zakan'izy ireo koa ny omby halatra miisa 45 ka dia nentin'ny Zandary niverina avokoa.
25 taona Ratompokolahy izao namoy ny ainy izao, ho fiarovana ny mpiray Tanindrazana aminy sy ny fananany. Tsy mbola nanam-bady kosa izy. Ny fianakaviam-ben'ny ZP dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana mana-manjo.